Maamulka Koonfur-Galbeed oo Beeniyay in Mukhtaar Roobow Lagu Dilay Dagaalkii ay Shabaabka ku Qaadeen (Dhagayso)
Waxaa saacadihii u danbeeyay soo baxayay warar sheegaya in Abuu Mansuur Roobow lagu dilay dagaal gaadmo ah oo ay ku qaadeen ciidamo katirsan Ururka Al Shabaab kaasi ka dhacay duleedka deegaanka Abal oo katirsan Gobolka Bakool.
Warkani la’isla dhexmarayay ayaa waxaa beeniyay masuuliyiin katirsan Maamulka Koonfur Galbeed, waxaana arintaasi ka hadla ku simaha Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, ahna Wasiirka Beeraha ee Maamulkaasi Maxamed Xasan Fiqi kaasi oo la hadlay Idaacada VOA sheegayna inuu nool yahay Muqtaar Roobow (Abuu Mansuur).
Wuxuuna tilmaamay wasiirku in maamulka Koonfur Galbeed uu xaqiijiyay arinkaasi, taasi oo meesha ka saareyso wararkii la isla dhexmaraayay oo sheegayay in Abuu Mansuur dagaalkii cuslaa ee Abal lagu dilay.
Wasiir Fiqi ayaa sheegay in Koonfur Galbeed si toos ah ugu bareerayso dagaal lagu dhibaateynaayo Shabaab, taasina wuxuu ku sheegay inay tahay waxa Maamulka uu u taagan yahay.
Waxaa adag helida xogaha dhabta ah ee ku saabsan dagaalkii cuslaa ee Abuu Mansuur iyo Al Shabaab ku dhexmaray Gobolka Bakool.
August 11, 2017 Geesey
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed oo Sagootiyay Mr Vikram Parekh (SAWIRRO) December 25, 2018